Statement to our stakeholders – Alpha
News and Activities of Alpha Power Engineering
In recent weeks, followed byapost ataFacebook page of Ministry of Construction related to the list of companies suspended by various ministries, Alpha Power Engineering has been hugely suffered by the ambiguity of the information it stated.
In August 2019, YESC (Yangon Electricity Supply Corporation) issuedaletter of notice to Alpha Power Engineering (APE) describing that company would be suspended from participating in the tenders organized by YESC for two years due to two comments made by the Third Party company. Despite clearance notice by the Third Party to YESC about this matter, YESC proceeded to suspend APE from entering to their tenders for two years.
In November 2019, Permanent Secretary office of MOEE provided the list of suspended companies to Ministry of Construction that proceeded to publish on their FB page under the title “Black List”. Due to this title which leads to misunderstand the audience that might think all companies mentioned there were black listed, the stakeholders of APE were confused.
The management of Alpha Power Engineering made this statement to ensure our customers, suppliers and stakeholders that we are suspended by only YESC not to bid at their tenders for two years started in August 2019. We are not suspended anywhere else apart from YESC.
Alpha Power Engineering မှ မိမိတို့၏ စီးပွားဖက် မိတ်ဆွေများသို့ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ယခင် အပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ဆောက်လုပ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၏ Facebook account မှ နေ၍ ၀န်ကြီးဌာန အသီးသီး၏ အမည်မည်းစာရင်း ခေါင်းစဥ်အောက်တွင် company များစာရင်းဖေါ်ပြခဲ့ရာ၊ သတင်း တိကျမှုမှ အားနည်းခဲ့သည့်အတွက် မိမိတို့ Alpha Power Company အနေနှင့် ထိခိုက်ခဲ့ပါသည်။
အကြောင်းမှန်မှာ သြဂုတ်လ ၊ ၂၀၁၉ တွင် YESC မှ စာတစောင်ပို့ခဲ့ပြီး၊ ယင်းစာပါ ဖေါ်ပြချက်မှာ မိမိတို့ company ကို YESC မှ တင်ဒါ များတွင် ယှဥ်ပြိုင်ခွင့် (၂) နှစ်ပိတ်သိမ်းကြောင်း ပါရှိပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ Third Party မှ မှတ်ချက်ပြုသည့် အချက် (၂) ချက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ Third Party မှ ထိုအချက် (၂) ခုကို ပြင်ဆင်ပေးသည့်အတွက် မှတ်ချက် ထပ်မံပြုစရာမရှိကြောင်း စာပေးပို့ထားသော်လည်း၊ YESC အနေနှင့် တင် ဒါပြိုင်ခွင့် ကို နှစ်နှစ် ပိတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
နို၀င်ဘာလတွင် MOEE အတွင်း၀န်ရုံးမှ ဆောက်လုပ်ရေး၀န်ကြီးဌာနသို့ suspended companies list ပေးပို့ရာတွင် တိကျစွာဖေါ်ပြမှု အားနည်းသောကြောင့် စာဖတ်သူအများစုမှာ နားလည်မှုလွဲခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
Alpha Power Engineering ၏ အုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့၀င်များသည် ယခု ကြေ ငြာချက်ဖြင့် မိမိတို့၏ စီးပွားဖက် မိတ်ဆွေများကို ခိုင်မာစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။ အခြေအနေတခုကြောင့် Alpha Power Engineering သည် YESC ဌာနတွင်သာ တင် ဒါ ယှဥ်ပြိုင်ခွင့် ကို သြဂုတ်လ ၊ ၂၀၁၉ မှ နှစ်နှစ် ပိတ်ထားခြင်းခံရခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Author alphaPosted on November 25, 2019 November 25, 2019 Categories Latest News